Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
UXiaochen edolobheni laseZhengzhou, esiFundazweni saseHenan
Ukuzikhukhumeza yisici esibi esibulalayo. Ngangivame ukuveza isimo sami sokuzikhukhumeza, njalo ngicabanga ukuthi ngangingcono kunabanye abantu. Ikakhulukazi uma ngichibiyela ama-athikhili noma ngixhumana mayelana nomsebenzi nomlingani engisebenza naye, njalo ngangiziveza njengosiyazi futhi ngingalaleli ngokuzithoba imibono yabanye abantu. Ukungakwazi kwami ukusebenzisana ngesihle nabalingani engisebenza nabo esikhathini esiningi kwadala izinkinga emsebenzini. Abafowethu nodadewethu baluveza kimina lolu daba izikhathi eziningi, futhi ngangivame ukufunda mayelana noNkulunkulu eveza izimo zabantu ezinokuzikhukhumeza. Kodwa njengoba ngangingekafezi ukuqonda kweqiniso ngemvelo yami uqobo kanye nomongo futhi ngingakakwazi ukukuzonda lokhu ngokweqiniso, nanini lapho ngingqwamana nesimo esifanelekile ngangihluleka ukuzilawula. Emva kwalokho, ngangiye futhi ngizizwe nginokuzenyanya, kodwa-ke njengoba okwenzekile kwakusuke sekwenzekile, engangikwenza kwakuwukuba ngiqhubeke nokuzama ukuqonda. Ngakho-ke kwenzeka njalonjalo. Lokhu kwangenza ngazizwa ngiphoxekile futhi ngithothongene.
Ngake ngabona amagama alandelayo kaNkulunkulu lapho ngenza umthandazo wami wokunikela umoya wami: “Ungayilungisa kanjani imvelo yakho? Okokuqala, kumele wazi imvelo yakho futhi kumele uqonde kokubili izwi nentando kaNkulunkulu. Ungakuqinisekisa kanjani ke, ngezinga eliphezulu, ukuthi uyakugwema ukwenza izenzo ezingalungile, wenza lokho kuphela okuvumelana neqiniso? Uma ufisa ukwenza ushintsho, kumele ukucabange lokhu. Ngemvelo yakho enephutha, yikuphi ukukhohlakala ekwenzayo futhi yiziphi izenzo ezenzayo, iyiphi ke indlela engenziwa futhi kungenziwa kanjani ukuze ilawulwe—lona umbuzo obucayi. … U-Lin Zexu wayethukuthela ngokushesha. Ngenxa yobuthakathaka bakhe wabhala lesi siqubulo esilandelayo ekamelweni lakhe: ‘Bamba Intukuthelo Yakho.’ Le indlela yomuntu, kunjalo iyasebenza ngempela. Umuntu ngamunye unezimiso zakhe angazilandela, ngakho kumele ubeke izimiso ngokuqondene nemvelo yakho. Lezi zimiso zibalulekile, ukungabi nazo akulungile. Lokhu kumele kube yisiqubulo sakho sokukholelwa kuNkulunkulu nendlela yakho yokuziphatha” (“Ukulungisa Imvelo Nokwenza Iqiniso” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Amazwi kaNkulunkulu anginikeza indlela esheshayo engangingayithatha. Ngaqonda ukuthi: Ukuze ngishintshe isimo esihlubukile, ngakolunye uhlangothi kufanele udle futhi uphuze njalo amazwi amayelana noNkulunkulu edalula umongo womuntu okhohlakele, kolunye futhi uhlangothi kufanele ugxile esiqubulweni sokulawula imvelo yakho ukuze ukwazi ukulawula ngokucacile izambulo zemvelo yakho ngaleyo ndlela ushiye isimo sakho ukuze wenze iqiniso. Yingakho, ngokuhambisana namaphuzu enkohlakalo yami njengesimo sami sokuzikhukhumeza, ukuzazi njengolungile, nokungazimiseli ukulalela imibono yabalingani bami engisebenza nabo, ngazakhela isiqubulo: “Imbondela yobulongwe ingaziqhenya kanjani ngephunga layo?” Noma yinini lapho ngiveza umbuzo kubalingani bami engisebenza nabo, ngangiqale ngisebenzise lesi siqubulo ukuze ngizixwayise, ngikhumbule ngokugqamile ukuthi umongo wami ubulongwe nokuthi umzimba wami wonke wembozwe yiphunga. Ngangiphinde ngikhumbule futhi nokuthi ngangidale kanjani izinkinga eziningi ngenxa yokuqholosha kwami nokugcwala umina, kanye nokuthi yayingekho into okwakufanele ngiyiqholoshele. Ngaleyo ndlela, ngangingeke ngihlale ngithi konke engikushoyo yikho okulungile, futhi kwakuzonginikeza intwanyana yenhliziyo efunayo, okungenza ngizimisele ukuzehlisa nokulalela imibono yabanye. Kwesinye isikhathi ngangisafuna ukuphikisa imibono yabanye, kodwa uma nje ngicabanga ngesiqubulo, ngangizimisela ukushiya umina ngiphile iqiniso lokusebenzisana ngokuzwana.
Emva kwesikhashana, ngathola ngingazelele ukuthi, lapho ngizehlisa, ngangithola ukukhanyiselwa okuthile kukaMoya oNgcwele kanye nokwambulelwa ngamazwi avela kubalingani engisebenza nabo, futhi ngibone amanye amaphuzu angasile endleleni engangamukela ngayo iqiniso. Ngesikhathi esifanayo futhi, ngaphinde ngathola amanye amaphuzu amahle ngabanye, futhi ngangizimisele ukufunda kubona ukuze ngizithuthukise. Futhi angizange ngicabange ukuthi ngingcono kunabanye abantu kukona konke futhi ngalehlisa ikhanda lami elizidlayo. Ukuzidela akuzange kuzwakale kubuhlungu njengalokhu kwakunjalo ngaphambilini, futhi ngezwa kusuka enhliziyweni ukuthi ukuzehlisa nokulalela ngesizotha imibono yabalingani engisebenza nabo kwaba kuhle kakhulu, hhayi nje ukuhlomula ngenqubekelaphambili yempilo yami kodwa kanye nokuphucula imiphumela yomsebenzi wethu ngokusizana lapho abanye besilele khona kanye nokuhlangana sibe munye.
Ngenxa yokubhekana nalokhu, ngathola ukuzwa ubumnandi bokuphila iqiniso ngase ngiyabona ukuthi ukwakha isiqubulo kungangenza ngikwazi ukulawula ngokucacile izambulo zenkohlakalo yami, hhayi nje ngokunciphisa iziphambeko zami kodwa futhi nokuzuza amanye amathuba okuqonda iqiniso. Ngesikhathi esifanayo, ngaphinda ngabona ukuthi izambulo zangaphambilini zesimo semvelo yami zazizimbi futhi zinyanyeka. Ngibonga uNkulunkulu ngokungihola ukuba ngazi lezi zinto. Kusukela manje, ngizozakhela iziqubulo ezihambisanayo namaphuzu enkohlakalo yami futhi ngizibambe ukuze ngikwazi ukuphila iqiniso. Futhi ngizofunda njalonjalo izwi likaNkulunkulu ukuze ngazi umongo wemvelo yami ukuze ngizizonde ngokweqiniso futhi ngilahle inkohlakalo yami ngokushesha ukuze ngenelise uNkulunkulu.
Okwedlule：Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu
Okulandelayo：Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo
UCheng Hao Edolobheni LaseYongzhou, Esifundazweni SaseHunan Umsebenzi umkami kanye nami esiwenzayo ebandleni ukushumayela ivangeli. Esikhathi esifusha…